आठ कविहरुको एउटै कविता संग्रह “एकात्म” पाठकहरुमाझ आएको छ । काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा शनिबार पुस्तकको विमोचन तथा विमर्श भएको हो । रंगकर्मी राजन खतिवडा, ..
प्रेम दिवस नजिकिदै छ । बजारमा प्रेमका उपहारहरुको चर्चा छ । भ्यालेन्टाईनका स्किमहरु थपिदैछन् । उपहार बेच्ने दोकानमा गुलाफ थुंगाहरु सजिदैछन् । युवा किशोर किशारीहरु मायालु..
साहित्यकार तथा गीतकार राजेन्द्र थापाको लेखन यात्रा ८ वर्षको उमेर देखि नै सुरु भएको थियो । उनी आफूले सानै उमेर देखि नै गजल, मुक्तकमा कलम चलाएको बताउँछन् । राजेन्द्रले ले..
फूल जस्तो मेरो काखमा कस्दाखेरि कस्तो लाग्यो ? दुई हातको बरियोले कस्दाखेरि कस्तो लाग्यो ? आँगनीमा जुनकिरीको रासलीला देखेपछि दैलो खोली मझेरीमा पस्दाखेरि कस्तो लाग्यो ? हि..
उद्योग अनि ब्यापार छिमेकीकै जिम्मा । रोजगारीको आधार छिमेकीकै जिम्मा ।। लोडसेडिङ हटाउने रे नेताजीले अब लगाएर जल भण्डार छिमेकीकै जिम्मा । ताला लगाई थुनिदिए गोर्खाली सेनाल..
कति मीठो नाम रैछ ‘रैना’ मैँसापको रैना रैना जपी राख्छ मैना मैँसापको । फिका लागे अरु सबै यस्तो रुप देख्दा नीलो गहिरो सागर जस्तै नैना मँैसापको । दूधैदूधले धोए जस्तै कल्कलाउँदो मुहार थुप्रै होलान् बस्तुभाउ लैना मैँसापको । राजीनामा पास गर्थेँ औँठा छाप लगाई मेरै नाममा परे धर्म बैना मँैसापको । एकान्तमा देख्न पाउँछ यस्तो […]
पढ्नु भयो अज्ञात सहिद ?
भन्दथ्यो सत्ता पल्टाउँछु, टाउको फुटेर सिकिस्त भो लगिदिऊँ अस्पताल भन्दा,आजै नेपाल बन्द भो । भोलिपल्ट भेटियो डाक्टर,इमर्जेन्सीको कक्षमा भन्यो यहाँ उपचार हुन्न,पाल्नुहोस् क्लिनिकमा । कांग्रेस कम्निष्ट सोध्यो पैले,बल्ल भर्ना अनि लियो फुटेको थियो टाउको,एक्सरे चै पेटकै दियो । खकार जाँच्नु स्वयम्भुमा,पाटनमा थुक जाँच्नु रे भक्तपुरमा पिस..
गजल प्रकट पंगेनी ‘शिव’को साँझपख
उठ्यो रिमाई फेवातालमा छाल साँझपख हान्यो रिमाई माझीदाइले जाल साँझपख । त्यही जालमा जेलिएर निस्किन् मत्स्यगंधा भेटँे रिमाई जालभित्र ‘माल’ साँझपख । के हेरेथिन् एकै नजर लाग्यो मनमा बाँण भन्नुहोला म त रिमाई बेहाल साँझपख । बान्की उन्को– हिसी उन्को–रुपै उन्को देख्दा सत्य रिमाई निको थेन चाल साँझपख । हात माग्दा हात दिइन् चुप्पा माग्दा [&h..
प्रकट पंगेनी शिवको सलाम
पहिलो सलाम साँझपछि आउने रातलाई दोश्रो सलाम साँझलाई मीठो पार्ने मातलाई । भर्दै गिलास ल्याउने चटट् तातो पिरो सितन तेश्रो सलाम छिन्छिन् चुरा बज्ने हातलाई । चौँथो सलाम नजरलाई पाँचौ अधरलाई छैटौँ सलाम मख्ख पार्ने यौवनको जातलाई । सातौँ सलाम बिजुलीलाई झ्याप्प निभ्ने कस्तो आठौँ सलाम अध्यारोमा हुने बातलाई । बाहिर पानी परेको छ कहाँ [&helli..
प्रकट पंगेनी शिवको एक गजल
तप्प तप्प जलबिन्दु चुहाएर के निस्कियौ स्नीग्ध कञ्चन कोमल आहा ।। नुहाएर के निस्कियौ । भाग्यमानी रैछ साबुन फिँजैफिज भै बरालियो जुन साबुनलाई अंग अंग छुवाएर के निस्कियौ । पानी पनि आगो बन्छ कामदेवको आशिष पाउँदा जुन पानीमा यस्तो रुप डुबाएर के निस्कियौ । घामको कुरा नगरौँ भो टाँसियो घाम त्यै लुगामा जुन लुगालाई भर्खर […]
प्रकट पगेनी ‘शिव’ को गजल
हातमा समाई उनलाई खोला तार्नुको मज्जा बेग्लै थियो सारीको सप्को अलि माथि सार्नुको मज्जा बेग्लै थियो । वारिबाट पारिसम्म छोटो बाटो भए पनि आलेटाले गर्दै बेला टार्नुको मज्जा बेग्लै थियो । भेल थियो ,भेलमा उनले डराएर टेक्नै छाडिन् मलाई भने यस्तै मौका पार्नुको मज्जा बेग्लै थियो । कुन्नि कता के—के गर्दा छोयो केमा पाखुराले त्यतिबेला [&hell..
नमज्जा संग खाडीमा मदन बेचिएको छ — कमल सरोवरको दशै सम्बन्धी ४ मुक्तक
मुक्तक नं १ उत्तर—उत्तर प्रगति होस्, दशैँ तिहार आउँदा घर दैलोमा उन्नति होस् ,दशैँ तिहार आउँदा चाडपर्वमा अन्धकार नहोस् ,कसैको जीवन मुहार—मुहारमै बत्ति होस् दशैँ तिहार आउँदा मुक्तक २ के दशैँ के तिहार प्रवास बासीको खाली हुन्छ निधार प्रवास बासीको दशैँ तिहारले उज्यालो ल्यायो भन्छन् अँध्यारो छ संसार प्रवास बासीको मुक्तक ३ मन बेचिएको छ..
गजल ः जिउन खोजे ठिटा नजर आयो
बल्ल प्रिय मिठा नजर आयो जिउन खोजे ठिटा नजर आयो ।। मर्नु निश्चय छ,जिन्दगी दाजै मात धेरै लिदा नजर आयो ।। दैब तिम्रो कहाँ छ स्थायी घर मात्र मन्दिर शिला नजर आयो ।। प्रेम निर्भर रकम कहाँ रैछ जान्छु साथी भिसा नजर आयो ।।